Klara rutiner i vardagen - Soomaali
Maareynta hawlaha maalinlaha ah
Joogtaynta howlaha maalinlaha ah ee si habsami leh u socda way adkaan kartaa marka aad haysato carruur yaryar. Waqtiyada jiifka iyo waqtiga cuntadu way adkaan karaan, mararka qaarna way adag tahay in laga baxo waqtiga loogu tala galay xanaanada. Furaha u ah helitaanka hawl maalmeedka maalinlaha ah inay shaqeeyaan waa adiga, qof weyn ahaan, inaad dejiso hanaan go'an. Ku bilow inaad ka fikirto sida aad u rabto waqtiga hurdada ama shaqada subaxnimo. Haddii aad wax u sameyso si isku mid ah markasta, ilmahaagu wuxuu la qabsan doonaa nidaamka - kaas oo markaa u socon doona si habsami leh.
Jadwalka wakhtiga sariirta
Waxaan dhamaanteen dareemeynaa kalsooni badan haddii aan ogaanno waxa laga filayo si aan ugu diyaar garowno. Carruurta yar yar laftoodu kama warqabaan waxa dhici doona, ama goorta. Tusaale ahaan, ma garanayaan maalmaha ay toddobaadka galaan xanaanada, iyo maalmaha ay guriga joogaan. Tan macnaheedu waxa weeye in carruurtu badnaa la kulmaan waxyaabo sida kediska ah oo lama filaan ah u dhaca. Carruurtu waxay kaloo bilaabi karaan inay ka fikiraan inaad sameyn doontid wax aadan dhab ahaan sameyn doonin. Haddii aad badanaa u kaxeyso ilmahaaga xanaanada, isaga / iyadu waxay u maleyn kartaa inaad aadeyso xanaanada mar kasta oo aad fuusho gaariga. Ilmahaagu wuxuu markaa noqon karaa mid aan faraxsanayn ama aan raalli ahayn marka isagu / iyadu ay ogaadaan inaad dhab ahaan aadayso meel kale. Tani waxay noqon kartaa khibrad xun, xitaa haddii ay tahay meel ilmahaagu ku raaxeysto. Si jadwalka joogtada ahi si habsami leh ugu socdaa, sidaas awgeed waa muhiim in dadka waaweyn ay si habboon u diyaariyaan carruurta si ay u ogaadaan waxa dhacaya.
Carruurta yar yar sidoo kale waxay u baahan karaan caawimaad si ay u dhammeeyaan waxay sameynayaan ka hor intaysan bilaabin wax kale. Tusaale ahaan, haddii aad u sharraxday ilmahaaga inaad labadiinaba aadaysaan, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tihiin inaad ka caawisaan isaga / iyadu inay dhammaystiraan hawshooda / dhaqdhaqaaqooda ka hor intaadan bilaabin inaad gashato dharkaaga badan.
Ku diyaari sawirro
Hal dariiqo oo wanaagsan oo carruurta yaryar looga caawiyo inay is diyaariyaan ayaa ah inaad tusto sawirrada waxaad sameyn doontid. Caruurta yaryari waxay sawirada ka fududyihiin fahamka iyo xusuusta.
Haddii aad tusto ilmahaaga sawirka xanaanada kahor intaadan bixin, isaga / iyadu way ogaan doonaan halkaad u socoto. Tani waxay yareyn doontaa halista isaga / iyada ku fikireysa inaad aadeyso dukaamada - ka dibna aad ka careysid markaad aado meel kale. Waxaad ku isticmaali kartaa sawirada taleefankaaga casriga ah ama waad daabici kartaa Booqo websaydhka www.bildstod.se Si aad u abuurto waxyaabo sawir ku saleysan oo aad u adeegsan karto inaad ku caawiso.
Ku diyaarso shaxda sawirka
Waxaad u adeegsan kartaa shaxanka sawirka si aad uga caawiso ilmahaaga inuu u diyaariyo waxqabadyada isaga / iyadu ay samaynayso, iyo siday u kala horreeyaan. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa shaxdan oo kale si aad uga caawiso ilmahaaga inuu u diyaar garoobo sariirta.
Jaantusyada sawirka waxay ufududeeyaan carruurta inay fahmaan howlaha oo dhan. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa jaantus ahaan liistada hubinta inta lagu jiro howlaha kala duwan. Waxaad ilmahaaga ka saari kartaa sawirka waxqabadka aad dhammaysay, ka dibna waxaad qaadataa tallaabo aad ku bilaabi karto tallaabada xigta ee hawsha.
Isu diyaari “marka hore - ka dib”
Si aad u kordhiso dhiirigelinta ilmahaaga, waxaad u isticmaali kartaa jaantus sawir ah habka 'marka hore - markaa'.
Haddii ilmahaagu ay ku adag tahay inuu xidho dharkiisa / labbiska, waxaad u isticmaali kartaa sawirro inaad xusuusiso isaga / iyada inaad wada samayn doontaan wax madadaalo leh marka aad gashato dharkaaga ka sarreeya. Marka hore waxaan xirnaa dharkeena - ka dib waxaan aadeynaa garoonka ciyaarta. Sawirka aad u isticmaalayso 'markaa' waa inuu noqdaa wax ilmahaagu runtii ku raaxeysto.
Ku diyaari fiidiyow yar
Qaab kale oo looga caawiyo ilmahaaga inuu diyaar ahaado oo loo kordhiyo dhiirigelintiisa waa iyada oo la tuso isaga / iyada muuqaal ah waxa aad sameyn doontid. Haddii ilmahaagu uusan rabin inuu aado goobta ciyaarta, fiidiyow gaaban oo muujinaya carruurta oo ku wada ciyaaraya luliddu waxay kordhin kartaa rabitaanka ilmahaaga inuu tago. Waxay kaloo noqon kartaa wax lagu farxo in aad si wadajir ah ula daawataan cajaladaha fiidiyowga oo aad ka wada hadashaan.
Ka dhig canuggaada mid ka qaybqaata in badan
Dhammaanteen waxaan u aragnaa inay aad u xiiso badan tahay inaan kaqeybqaado waxqabad haddii aan dareenno inay ku lug leedahay. Haddii aad ka caawiso ilmahaaga inuu si aad ah ugu lug yeesho howlaha, waxaad ka dhigi doontaa isaga / iyada dhiirrigelin badan marka la barbar dhigo xaalad uu isagu / iyadu si fudud 'ugu hoggaansamayo hoggaankaaga'.
U oggolow ilmahaagu inuu doorto
Habka ugu fudud ee lagu kordhin karo ka-qaybgalka ilmahaaga ayaa ah in isaga / iyada fursad loo siiyo inuu wax doorto. Inta badan waa ku filan tahay in loo oggolaado ilmahaaga inuu sameeyo go'aanno yaryar si uu u kordhiyo dhiirrigelinta isaga / iyada.
Tusaale ahaan, waxaad u oggolaan kartaa ilmahaaga inuu doorto koofiyaddiisa / keeda, ama inaad qaadatid wiishka ama aad jaranjarada u isticmaashid. Markay tahay waqtiga sariirta, waxaad u oggolaan kartaa ilmahaaga inuu kala doorto cadayga kala duwan, ama buugga aad isla aqrin doontaan. Waa muhiim inaad u cadeyso ilmahaaga doorashada. Fikradda wanaagsan ayaa ah inaad kor u qaaddo waxyaabaha uu ilmahaagu kala dooran karo, ama aad tusto isaga / iyada sawirradooda.
U dhiib hawl canuggaaga
Qaabka kale ee looga dhigi karo ilmahaaga ka-qayb-gal badan ayaa ah in la siiyo isaga / iyada hawl ay qabtaan. Carruurtu waxay u maleeyaan inay tahay wax lagu farxo inay qabtaan shaqooyin, waxayna dareemaan inay gaar yihiin marka aad weydiisato inay ku caawiyaan. Tusaale ahaan, waxaad weydiisan kartaa ilmahaaga inuu tirtiro miiska ka dib cashada, inuu xafaayaddiisa / keeda ku tuuro qashinka, ama inuu damiyo nalka. Haddii aad wax ka iibsaneyso, waxaad u oggolaan kartaa cunugaada inuu waxyaabaha aad iibsato ku rido gaariga, ku rido suunka wax lagu raro, ama risiitka ha.
Markaan carruurta siino hawlo yar yar oo ay qabtaan, waxaa sidoo kale halista ka yar inay bilaabaan inay sameeyaan wax aynaan rabin inay sameeyaan. Haddii aad weydiisato ilmahaaga inay kaa caawiyaan inaad waxyaabaha aad soo iibsatay ku rido bacaha wax lagu iibiyo, tusaale ahaan, waxaa ka yar khatarta ah inuu isaga / iyadu cararaan ama ay bilaabaan inay waxyaabo kale soo qaataan.
Laqabso heerka shuruudaha
Carruurta waxay si sax ah wax oogu bartaan waxyaabaha ay sameeyaan Markaa si aad u hubiso in ilmahaagu baran karo waxyaabaha joogtada ah, waxaa muhiim ah inaad ka caawiso isaga / iyada inuu guuleysto. Weydii ilmahaaga inuu sameeyo waxyaabo ku filan oo adag isla markaana ka caawiyo markii loo baahdo. Haddii ilmahaagu aanu samaynayn wixii aad ka codsatay isaga / iyada, waa fikrad fiican inaad isweydiiso sababta. Miyaanay sifiican u cadeyn waxaad rabto ilmahaaga inuu sameeyo? Aad may u adag tahay? Ama canuggaaga laguma dhiirigelin inuu sameeyo?
Ilmaha ma sameyn karaan wixi samee aan dhahno?
Hawlaha fudud ayaa ka dhib badan carruurta inta aan ka fikirno. Haddii aad weydiiso ilmahaaga inuu xidho dharkiisa / keeda, su'aasha kaliya ma aha in ilmahaagu awoodi karo inuu xidho jaakadiisa / keeda. Isaga ama iyadu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay fahmaan waxaad sheegayso, si uu u dhammeeyo ciyaarteeda / keeda, oo aan lagu mashquulin jidka uu ka baxayo hoolka. Isaga / iyadu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa dharka ah ee ay tahay inay marka hore xidhaan. Markuu ilmuhu awoodi waayo inuu qabto hawl, waxay u badan tahay inay ku adag tahay asaga / ayada. Ka fikir sidii aad hawlahan u kala caddayn lahayd una fududayn lahayd. Si tan loo sameeyo, hubi inaad siiso tilmaamo cad - adoo adeegsanaya sawirro haddii loo baahdo - ama ka caawi ilmahaaga qaybaha khiyaanada leh ee hawsha si uu isagu / iyadu u guuleysto oo uu doonayo inuu mar kale sameeyo
Waxa kale oo muhiim ah in la xasuusnaado in carruurtu wax badan ama ka yar samayn karaan waqtiyo kala duwan. Haddii ilmahaagu daalan yahay, gaajaysan yahay, xanaaqsan yahay ama xanaaqsan yahay, isaga / iyadu waxay awoodi doonaan inay yareeyaan keligood / ayada / keeda. Markuu ilmahaagu ku dhex jiro jawi cusub dad kala duwan, ama meel buuq badan iyo dhaqdhaqaaq badan, isagu / iyadu waxay badanaa u baahan doonaan caawimaad ka badan tan kale.
Ma sharci muhiim ah baa?
Qaangaar ahaan, howshaadu waa inaad korisaa oo aad waxbartaa ilmahaaga. Tani badanaa waxay tarjumaysaa sameynta dalabyo badan Dalabyo badan, si kastaba ha noqotee, waxay si fudud u keeni karaan isku dhac haddii cunuggu uusan sameynin waxa qofka weyn yiraahdo. Si loo yareeyo khilaafaadka iman kara, markaa waa fikrad fiican in laga fikiro xeerarka ugu muhiimsan. Markaad weydiiso ilmahaaga inuu joojiyo wax qabadkiisa, sidoo kale waa muhiim inaad u sharaxdo ilmahaaga waxa ay tahay inuu sameeyo / taas bedelkeeda. Tusaale ahaan, haddii ilmahaagu aad ugu xun yahay xayawaanka la korsado, waxaa muhiim ah inaadan si fudud u oran 'jooji', laakiin sidoo kale u muujiso ilmahaaga sida tartiib tartiib ah loogu salaaxo xayawaanka.
In khilaafaadka la dejiyo
Markuu ilmahaagu xanaaqo ama caroodo, xitaa way ku adag tahay asaga / ayada inay fahmaan waxaad rabto, iyo inay awoodaan inay sameeyaan. Xaaladaha noocaas ah, way ku adag tahay ilmahaaga inuu barto wax fududeynaya howsha maalinta xigta. Mar alla markii khilaaf yimaado, markaa waa muhiim inaad isku daydo inaad dejiso, halkii aad ku qasbi lahayd ilmahaaga inuu is dhiibo. Isku day inaad is dejiso, oo aad niyadda u dejiso ilmahaaga. Markuu ilmahaagu xasilo, waad caawin kartaa si loo caddeeyo waxaad samaynaysay. Waxaad markaa ka fikiri kartaa sababta isku dhacu u kacay. Ka fikir sida aad uga dhigi karto jadwalka mid cad oo fudud, iyo sida aad u bari karto ilmahaaga inuu sameeyo wixii aad weydiisatay.
Helitaanka howlo maalmeedka si aad u socod wanaagsan (pdf)﻿